ကျွန်ုပ်တို့၏ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များမှ မှားယွင်းနေသောအရာ ၉ ခု - ONE DAILY MEDIA
ကျွန်ုပ်တို့၏ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များမှ မှားယွင်းနေသောအရာ ၉ ခု
အပြစ်အနာအဆာကင်းပြီး ကောင်းမွန်သော အသားအရည်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များသတ်မှတ်ကာ လိုက်နာ၍ကြိုးစားကြရပါတယ်။ ထိုအတွက် စီမံကွပ်ကဲမှုအား စီစဉ်ရာတွင် အကောင်းဆုံး ရည်ရွယ်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့မသိလိုက်ဘဲ ပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။ အချို့သော အရေပြားဆရာဝန်များ၏ အဆိုအရ အမျိုးသမီး အများအပြားသည် နေ့တိုင်း အသားအရေကို အစိုဓာတ်တောင် မရရှိကြပေ။ အစိုဓာတ်မရှိခြင်းသည် အရေးအကြောင်းများ ပိုမိုကြီးထွားလာစေရုံသာမက ဝက်ခြံနှင့် အစက်အပြောက်များကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
1. မိတ်ကပ်မဖျက်ဘဲ သင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို မစတင်ပါနှင့်
အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရဲ့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းကတော့ သန့်စင်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ PM မှာ နှစ်ဆင့်သန့်စင်ပေးပါ။ ပထမအဆင့်က မိတ်ကပ်တွေကို ဆေးကြောဖို့ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ချွေးပေါက်တွေကို မပိတ်ဆို့နေစေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
2. မှားယွင်းသော သန့်စင်ဆေးကို အသုံးပြုခြင်း
စိုစွတ်နေတဲ့ အသားအရေဟာ သင့်အတွက် ထင်သလောက် အဆင်မပြေပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြား၏ပုံမှန် pH သည် 5.5 ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် pH မြင့်မားသော သန့်စင်ဆေးများဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆီဂလင်းများကို လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ ထုတ်လုပ်ရန် လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
3. သန့်စင်ပြီးနောက် Toner မသုံးပါနှင့်
Toner သည် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုတွင် လိုအပ်သော အဆင့်တစ်ခုဟု ထင်ရသော်လည်း၊ Toner များသည် သင့်အသားအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးကာ ရေတွင်ရှိသော ကလိုရင်းနှင့် သတ္တုဓာတ်များကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ အရက်ပြန်မပါတဲ့ ဆေးဘူးကို သုံးနေတယ်ဆိုတာ သေချာပါစေ။
4. exfoliating ထုတ်ကုန်များစွာကို အသုံးပြုခြင်း
အရေပြားဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးသော်လည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သန့်စင်မှုသည် သင့်အရေပြားကို ပျက်စီးစေပြီး ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့် နီရဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ယင်းအစား အရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ် တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ပြီး ဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အက်စစ်အခွံခွာနိုင်သော serums ကိုသုံးကြည့်ပါ။
ဝက်ခြံတွေကို မညှစ်ပါနဲ့။ဒီနည်းက သင့်မျက်နှာကို ရောဂါပိုးတွေ ထပ်ပြီး ပျံ့နှံ့စေတာကြောင့်ပါ။ အဲဒီအစား salicylic အက်ဆစ်လိုမျိုး အထူးဝက်ခြံကုသနည်းတွေကို အစက်အပြောက်တွေအတွက် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုပါ။
6. အဆီများသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ
သင့်အသားအရေက အဆီပြန်တာတောင်မှ သင့်အသားအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးဖို့ အဆီတွေကို သေချာသုံးသင့်ပါတယ်။ ရေဓာတ်မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆီဂလင်းများ ပိုမိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ organic rosehip oil ၊ လျှော်စေ့ဆီ သို့မဟုတ် ရွှေဖရုံစေ့ဆီကဲ့သို့သော linoleic acid ပါသောဆီများကို သုံးခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။
7. SPF ထုတ်ကုန်များကို မသုံးခြင်း
နေရောင်အောက်မှ အကာအကွယ်မဲ့ အသားအရေက အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ အရောင်ခြယ်မှုတွေ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နွေရာသီမှာတင်မဟုတ်ဘဲ နေ့တိုင်း Sunscreen သုံးသင့်တယ်။ SPF အဆင့်မြင့်လေ ပိုကောင်းလေပါပဲ။
8. ခေါင်းအုံးစွပ်ကို ပုံမှန်မပြောင်းခြင်း
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခေါင်းအုံးစွပ်တွေဟာ တကယ်တော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပြင်ပမှ ဘက်တီးရီးယားများစွာကို စုဆောင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ အိပ်နေစဉ်တွင် ဤဘက်တီးရီးယားများသည် သင့်မျက်နှာသို့ ကူးပြောင်းလာနိုင်ပြီး ဝက်ခြံဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် ခေါင်းအုံးစွပ်တွေကို တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ပြောင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
၉။ ရေအလုံအလောက်မသောက်ခြင်းနှင့် အသင့်စား အစားအစာများစားခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ မျက်နှာတွင် ပေါ်လာသော ပြဿနာတိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ စတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားသောက်မှု အလေ့အထကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ရေကို များများသောက်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ အစားအစာကို စားသုံးလိုက်ပါ၊ သင့်အသားအရေက ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
BONUS- မင်းရဲ့ အလေ့အထဆိုးတွေကိုပြုပြင်လိုက်ပါ
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ငယ်ရွယ်နုပျိုသော အသားအရေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကော်လာဂျင်နှင့် အီလက်စတင်တို့ကို ချေဖျက်ပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဤအလေ့အကျင့်ကို ရှောင်ခြင်းက အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို လျော့ပါးစေပြီး နှေးကွေးစေပါတယ်။
သင့်အသားအရည်အတွက် ဒီအဆင့်များက အမှန်တကယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ယခု အကြံပြုထားသည့် အကြံပြုချက်များကို သင် စမ်းဖူးပါသလား။ သင့်အဖြေများကို အောက်ပါမှတ်ချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေခဲ့နိုင်ပါတယ်
ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု နည်းလမ်းအမှား ၇ ချက်
မိခင်တစ်ဦး၏ ဗိုက်က မပြည့်စုံသော်လည်း အလှပဆုံးဆိုတာ သက်သေပြနေသည့် ဓာတ်ပုံများ